Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mmelite ọhụrụ: Akwụkwọ ntuziaka nlele whale Canada ruru $ 10,000
A tara onye ọkachamara nleba anya whale nke Campbell River $10,000 n'okpuru Iwu Species At Risk Act maka ịma ụma na-abịarute nso whale na-eyi egwu.
Na Septemba 13, 2021, n'ụlọ ikpe mpaghara Campbell River, British Columbia, Canada, Onye ọka ikpe dị ebube R. Lamperson chọtara Nicklaus Templeman, onye nwe na onye ọrụ Campbell River Whale na Bear Excursions, ikpe mara mmebi n'okpuru ụdị abụọ ahụ dị n'ihe egwu na Federal. Ọrụ Azụ.
Ọkaikpe Lamperson nyere iwu ka Maazị Templeman kwụọ ụgwọ $5,000 maka mmebi nke ọ bụla, maka ngụkọta nke $10,000. O nyekwara iwu ka ejiri ego ndị a mee ihe maka nchekwa na ichekwa anụ na -a mamụ mmiri na mmiri dị na British Columbia.